Chrome OS 91 wuxuu la yimid taageero wareejinta faylka, hagaajinta amniga iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Chrome OS 91 wuxuu la yimid taageero wareejinta faylka, hagaajinta amniga iyo waxyaabo kale
Dhawaan horumariyeyaasha Google ee mas'uulka ka ah mashruuca Chrome OS, ku dhawaaqay daahfurka nooca cusub ee nidaamka hawlgalka ee Chrome OS 91, nooca ay ku cusub tahay waxyaabaha cusub ee la soo bandhigo ayaa ah mid lagu taageerayo wareejinta faylasha u dhexeeya qalabka, hagaajinta amniga, iyo waxyaabo kale.
Kuwa aan aqoon u lahayn Chrome OS, waa inaad ogaataa in nidaamku ku saleysan yahay Linux kernel, ebuild / portage qalabka dhismaha, qaybaha furan, iyo shabakadda Chrome 91.
1 Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee Chrome OS 91
Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee Chrome OS 91
Qaabkan cusub taageerada barnaamijyada Linux ayaa la dejiyay, taas oo hore ugu jirtay tijaabada beta. IYOTaageerada Linux waa karti yeelatay qaabeynta qaybta «Configuration> Linux», taas oo ah inaad markaa gujiso badhanka «Rakib», ka dib markaa codsiga «Terminal» oo leh jawi Linux ah ayaa ka muuqan doona liiska codsiyada, kaas oo aad u socon karto si aan macquul ahayn amarrada. Faylasha waxaa laga heli karaa deegaanka Linux oo laga helo maamulaha faylka.
Hawlaha codsiyada Linux waxay ku saleysan tahay nidaamka hoose ee 'CrosVM' waxaana loo abaabulay iyadoo la bilaabayo mashiin Linux dalwad ah iyadoo la adeegsanayo KVM hypervisor. Weelal gooni ah oo leh barnaamijyo ayaa lagu sii daayaa gudaha mashiinka farsamada gacanta, kaas oo lagu rakibi karo sida codsiyada caadiga ah ee loogu talagalay Chrome OS. Markaad ku dhejineysid barnaamijyada Linux garaafka ah mashiinka meertada ah, waxay ku bilaabanayaan isbarbardhiga barnaamijyada Android ee ku jira Chrome OS oo ay la socdaan muuqaalada astaamaha.
Sidoo kale, Barnaamijyada ku saleysan Wayland labaduba waxay bilaabaan iyo barnaamijyada caadiga ah ee X waa la taageeraa (adoo adeegsanaya lakabka XWayland). Loogu talagalay socodsiinta codsiyada sawirada, CrosVM waxay siisaa taageero dhisme ah macaamiisha Wayland (virio-wayland) oo kusocota dhinaca ugu weyn ee martida loo yahay ee Sommelier serverka isku dhafka ah, kaas oo taageeraya farsamaynta farsamaynta xawaaraha qalabka.
Cusboonaysiin kale oo taagan ayaa ah taas taageerada Share Near ayaa lagu daray, maxaa wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso leh oo aamin ah ugu wareejiso faylasha u dhexeeya Chrome OS ama qalabka Android oo ay leeyihiin isticmaaleyaal kala duwan. Share Near wuxuu suurtogal ka dhigayaa in la diro oo la helo feylal iyada oo aan la siinin helitaanka xiriirada iyo iyada oo aan la muujin macluumaadka aan loo baahnayn.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa taas awood u lahaanshaha qaabeynta gudaha VPN ayaa la bixiyay masraxa kahor intaadan galin. Isku xirnaanta VPN waxay hadda taageertaa bogga aqoonsiga isticmaalaha, oo u oggolaanaya taraafikada la xiriirta aqoonsiga inay ka gudbaan VPN. Dhismaha gudaha ee VPN wuxuu taageeraa L2TP / IPsec iyo OpenVPN.
Calaamadaha la hirgeliyey ee tilmaamaya jiritaanka ogeysiisyo aan la aqrin oo la xiriira codsi gaar ah. Haddii ay jiraan ogeysiisyo kujira barnaamijka raadinta barnaamijka, calaamado yar oo wareega ah ayaa hadda lagu muujiyaa astaanta dalabka. Qaabeynta waxay bixisaa suurtagalnimada in la joojiyo sumadahaan.
Maamulaha faylka wuxuu bixiyaa marin u helida qad la'aanta faylasha ku keydsan Google Docs, Google Sheets, iyo Google Cloud Slides. Si aad ugu suurogasho helitaanka feylasha qaab khad la'aanta ah, waa inaad doorataa tusaha qeybta "My Drive" ee maareeyaha feylka oo aad dhaqaajisaa jeegga "Available offline". Mustaqbalka, feylashaan waxaa laga heli karaa iyada oo loo maro tusaha "Khadka Tooska ah" oo gooni ah.
Finalmente hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato ku saabsan qaabkan cusub ee nidaamka, waxaad ku hubin kartaa faahfaahinta adigoo tagaya xiriiriyaha soo socda.
Dhismaha cusub hadda waa la heli karaa inta badan Chromebooks hadda, marka lagu daro xaqiiqda ah in horumariyeyaasha dibedda ay leeyihiin noocyada kombiyuutarada caadiga ah oo ay la socdaan x86, x86_64 iyo processor-yada ARM.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, haddii aad tahay isticmaale Raspberry ah, waa inaad ogaataa inaad sidoo kale ku rakibi karto Chrome OS qalabkaaga, kaliya nooca aad ka heli karto uusan ahayn midka hadda socda, waxaana weli jira dhibaatada dardargelinta fiidiyowga oo ay ugu wacan tahay qalab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Chrome OS 91 wuxuu la yimid taageero wareejinta faylka, hagaajinta amniga iyo waxyaabo kale
CentOS Linux 8.4 hadda waa la heli karaa waana kuwan isbeddelladooda
VzLinux, distoor kale oo ballan qaada inuu noqon doono bedelka ugu habboon ee CentOS